Injeniera - Pejy 3 - Geofumadas
Fianarana: Famakafakana sy famolavolana firafitra ampiharina amin'ny Urban Building
Ny 7 martsa dia hisy seminera an-tserasera izay hananganana ny fampidirana ny làlam-pamokarana ho an'ny famakafakana sy ny famolavolana drafitra tranobe an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny fitaovana: STAAD.Pro RAM Structural System STAAD.Fototra mandroso tadidiko fa nahafantatra an'i STAAD fony izy io dia dika mitovy amin'ny DOS, ankehitriny mahita ny fomba ...
Fampianarana CAD / GIS, Engineering
Inona no vaovao amin'ny GEO5 kinova 15
Taona vitsivitsy lasa izay dia nanao famerenana an'ity rindrambaiko ity aho, izay heveriko fa ny tsara indrindra ho an'ny mekanika amin'ny tany. Tamin'ity herinandro ity dia liana tamin'ny famoahana ny kinova GEO5 vaovao izahay, izay mino izahay fa heken'ireo mpampiasa an'ity fitaovana ity, izay misongadina ao amin'ny ...
BiblioCAD dia tranokala misy rakitra izay tsy azo sakanana. Afaka mamaha mora foana ianao rehefa manao tetik'asa na manome hevitra vaovao momba ny fampivelarana azy. Andao jerena ny tranga sasany: mitazona antsipiriany momba ny tongotra mitokana misaraka isika, miaraka amin'ny fijery isometrika, fizarana ary drafitra. Mila olona, ​​hazo na ...
gvSIG Fonsagua, SIG ho an'ny famolavolana rano
Fitaovana sarobidy iray izy io ho an'ireo tetikasa miompana amin'ny sehatry ny rano sy fidiovana ao anatin'ny sehatry ny fikambanana fiaraha-miasa. Amin'ny fomba mahazatra, Epanet dia niasa tamin'ny vokatra tsara, na dia misy fetrany aza ny fizotrany amin'ny fanovana. Rehefa avy nitady ny antony nahatonga ny gvSIG sy ny fiaraha-miasa ho tsy hita maso avy amin'ny ...
Tamin'ny faha-5 taonany, ny vavahady Soloingenieria.net dia nametraka paikady fitomboana, faharetana ary fanaparitahana izay nahasarika ny saintsika androany maraina. Ny voalohany dia ny fandaminana ny CD fantatra amin'ny anarana hoe Solo Ingeniería Premium 2010, izay misy ny fanangonana ireo sanganasa tsara indrindra nandray anjara tamin'ny ...
Efa nametraka ity kilalao ity aho, izay nolazaiko anao omaly, miresaka momba ny V8i kinova 8.11.06.27 aho. Amin'ny voalohany dia atsangana ny takelaka iray izay mifantoka avokoa ny fampiasa rehetra. Ao amin'ny faritra ambany dia misy ny takelaka: Surfaces Geometry Prefers Drainage Topography Templates Corridors Modeler of works Na dia eo aza ireo,…
Wow, tsara tarehy loatra io lohahevitra io, tsy dia te-handinika izay azoko aho. Nanomboka nanandrana niresaka momba an'i Geopak aho, fa amin'izao fotoana izao vao tonga eto amiko ny PowerCivil, mamonjy tontolo iray ho ahy, tsy maintsy hizaha toetra aho raha tena marina daholo izay lazainy. Bentley taloha ... Raha misy ...
GaliciaCAD dia tranonkala iray manangona fitaovana ilaina betsaka amin'ny injeniera, topografika ary maritrano. Ny ankabeazan'ny loharanom-pahalalana misy dia maimaim-poana na maimaim-poana ampiasaina, na dia misy aza mila mpikambana, miaraka amin'ny mpikambana 20 Euro isan-taona izay misy CD misy bloke 8,000. Raha sendra mpiara-miasa dia ...
Arivte, be dia be ho an'ny Injenieran'ny Sivily
I Arivte.com dia vondrom-piarahamonina iray, misy fifamoivoizana marobe avy any Peroa fa ny atiny mahaliana azy amin'ny sehatra samihafa amin'ny Siansa sivily. Somary manahirana ny fidirana amin'ireo lohahevitra, satria ny endrika dia forum misy subforum, izay misy fiatraikany amin'ny fanaparitahana votoaty nefa voasoratra anarana indray ary hitanao ny kofehy, ...
Injeniera, GIS ary fitantanana eo an-toerana: Courses izay akaiky
Farafaharatsiny, ireo dia taranja izay ho avy any Amerika Latina, ny fahafaha-mampihatra azy ireo dia efa misy izao: Land Markets: Event: Fomba empirical ny Land Markets any Amerika Latina Date: 19 ka hatramin'ny 23 Oktobra 2009 Toerana: San José, Costa Rica Famintinana: Ity fampianarana ity dia natao hampahafantatra ...
Fampianarana CAD / GIS, Engineering, Land Management
Ingeosolum dia mandefa gazety
Volana roa lasa izay, ny orinasa Ingeosolum dia nandefa bulletin électronique iray izay anateran'izy ireo zavatra momba ny zava-mitranga ao amin'ny faritry ny injeniera, ary indrindra ny jeotekinika. Ity no orinasa mitondra fiara ao aorian'ny Geo5, avy amin'ny FINE Software, izay nodinihiko tamin'ny fotoana hafa. Amin'ity andiany faharoa ity dia manao ...